Ny taratri’ny kolontsaina Amerikana sy ny kolotsaina ny amin’ny fandraisam-bahiny avy any atsimo ny Etazonia no fototra nihorenan’ny : Workshop Idea Center.
Rehefa avy nonina tany Etazonia nandritra ny taona maro izahay dia nahatsikaritra fa, ny fiainana andavanandron’ny Malagasy dia tsy manome fotoana ho azy ireo hanatanterahina ny nofinofiny sy ireo vina ny amin’izany. Koa hita fa raha eo amin’ny sehatry ny asa dia voafetra ihany amin’ny fivelomana ary adino ilay finiavana hivoatra mifanaraka amin’ny nofiny tsirairay.
Izahay ato amin'ny Workshop Idea Center, dia nametraka tanjona ny hampitombo ny vokatra sy ny fahaiza-mamorona amin'ny alalan'ny fanabehazana sy ny fifampizarana.
Inona ary no atao amin’ny Workshop Idea Center ?
Toerana iray afahana mandraharaha, miasa sy miara-miasa natokana :
Ho an'ny mpitondra, ny mpianatra, mpandraharaha, mpandraharaha ara-barotra, mpikirakira, mpanoratra, mpiasam-panjakana, mpanolontsaina tsy miankina, mpampianatra na mpivahiny matetika, izay miara-miaina ao anaty fiarahamonina.
Hifandraisana amin’ny olona maro mba afahana mifampizara sy mampitombo traikefa, manokatra làlana ho amin’ny fiaraha-miasa.
Sehatra afahana mifanakalo sy mifampizara ara-kolontsaina sy arak’asa.
Ao Ankorondrano no ahitana ny toerana malalaka afahana miasa, izay manakaiky ireo distrikan’ny orinasa eto an-drenivohitra. Ary eny Manjaka Ilafy/ Analamahintsy Kariera kosa no misy toerana milaminana hafahana miala-voly na miasa ihany koa.
Ny soatoavina vohizinay
Manaja ny kolontsaina isan-karazany, mandray tsy akanavaka ny olona rehetra ary miara mivoatra.
Fanabehazana sy fifampizarana dia zava-dehibe aminay ka antoka iray hisian’ny fivoarana eo amin’ny fiaraha-monina.
Mijery hatrany ny lafin-tsara: Tsy misy olona tonga lafatra fa miezaka hatrany ny mijery ny tsara ao amin'ny tsirairay isika. Izany no mampivelatra ny saina afahana mandroso.
Fitovian-jo: tsy manavakavaka, na inona kolontsaina, na inona finoana, na inona sehatra misy ny tsirairay.
Tsy natao ho an’ireo mpanjifa ihany ny tanjona vohizinay, fa miaina izany koa izahay. Matoky ny fahaleovantenan’ny tsirairay, ary mihezaka hatratra ny fanamby miaraka. Avy amin'ny sehatra samihafa, nefa kosa mikasa ny fahombiazana ny amin’ny asa sy andraikitra tanterahinay, indrindra indrindra fa ny fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa.